Imbali yePasika esihlala siyibona. Kutheni singazifundi iincwadi? | Uncwadi lwangoku
Iiklasi zamandulo zePasika
Sukusilela. Ixesha elide esinokukhumbula ngalo ziye zafakwa kumabonakude ngePasika. Sibonile amaxesha amaninzi, kodwa siza kuqhubeka sizibona. Kuzo zonke iinguqulelo zayo. Iiklasikhi, ezangoku ... Inkcubeko isithethe, nokuba banobuqili kangakanani eklasini.
KwaYuda UBen-Hur kunye noMessala, umphathi-waka UMarco Vinicio kunye nomlawuli NguNero, kunye nekhoboka elingenakufa I-Spartacus Ukuchasa patrician kwaye engayeki UMarco Licinius Crassus. Siza kubabona kwakhona, ngokuqinisekileyo, kodwa ...sizifundile iinoveli Yintoni esekwe kwimifanekiso esinayo ngabo? ¿Siyabazi ababhali bayo? Ewe makhe sijonge kwaye sikhumbule.
1 UBen-Hur, Ibali likaKrestu-uLewis Wallace
2 Quo vadis? -UHenrik Sienkiewicz
3 USpartacus-Howard ngokukhawuleza
UBen-Hur, ibali likaKristu -ULewis Wallace
Umkhosi I-wall wallace (Ngo-1827-1905) wayengumntu ophantsi kuka-Ulysses Grant kwiMfazwe yamakhaya yaseMelika, kodwa ekwangumbhali kunye nediplomat. Esidlangalaleni le inoveli okokuqala ngqa ngo-1880. Ithatha ii-editions ezininzi kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezininzi, kwaye ihlala ikwincwadi yenoveli eyimpumelelo neyaziwayo.
Oku ngokukodwa kubonga kumabhayisikobho. Yiya sele Iimuvi ezine (kunye nokufutshane okufutshane kunye nokufutshane): eyokuqala UFred niblo ngo-1925, umsebenzi wobugcisa UWilliam wyler Ngo-1959 (i-Oscars ezilishumi elinanye kunye nenye yeendlela eziphambili zikaCharlton Heston), USteve Shill ngo-2010 nowokugqibela (kwaye akaphumelelanga) ka UTimur Bekmambetov kunyaka ophelileyo
El impikiswano Iyaziwa kwaye yenzeka ngeenxa zonke ubomi bukaYuda uBhen-hure, umYuda osisityebi, owayephila ngexesha likaYesu waseNazarete. Ngaphandle kobuhlobo bakhe bobuntwana kunye nomphathi wamaRoma Umyalezo, imeko yezopolitiko ebuthathaka yexesha kunye nelishwa ngengozi ebangela yakhe uwe kubabalo kunye nosapho lwakhe.
Yenziwe ukuqhuba isikhephe kodwa, emva komlo ngokuchasene nabaphangi kunye nokusindisa isidwangube saseRoma Owesihlanu uArius, UBen-Hur uba ngunyana wakhe owamkelweyo. Uya kubuyela kwelakwaYuda ngoncedo lwexhego IiSimonides kunye I-Arab Sheikh Ilderim, Uya kujongana noMessala kwaye aziphindezele kugqatso lweenqwelo.
Quo vadis? - UHenrik Sienkiewicz
Uninzi lufuna ukubona kule noveli a Isikweko sepolitiki de la EPolonia awayehlala kuyo umbhali wayo, UHenrik Sienkiewicz (Ngo-1846-1916). Ngaphantsi kwedyokhwe impiriyali yaseRussiaIzibonda zelo xesha, ezaziphikisane nazo, zazilingana nazo amaKristu okuqala atshutshiswa ejikeleze iRoma. Incwadana iqala ngonyaka Ngama-63 AD, kwaye siya ukubuya komlawuli we-Marco Vinicio eRoma phantsi komthunzi wengqondo yomlawuli odumileyo uNero.
La Inguqulelo yefilimu eyona idumileyo sayina UMervyn Leroy ngo-1952. Yayinomlingisi omangalisayo okhokelwa ngu URobert Taylor, Peter Ustinov, Leo Genn, kunye noDeborah Kerr. Loo mlilo wase-Roma wagqumelela ngaphaya kwaye wahlabelelwa nguNero osisithsaba omkhulu ka-Peter Ustinov ohleli kakuhle kwii-retina zethu.
I-Spartacus -Howard ngokukhawuleza
Howard melvin ngokukhawuleza (Ngo-1914-2003) wayengumbhali ophumeleleyo kwaye yemisebenzi yamapolisa, inzululwazi yesayensi kwaye ikakhulu ezembali, apho angena kwimicimbi yezentlalo nezopolitiko. Ukudibana kwakho no Iqela lamaKomanisi wamkhokelela intolongo kwaye wamfaka kuluhlu lwabamnyama lwamagcisa ngexesha le "Ukuzingelwa kwamagqwirha" USenator McCarthy, ke kuye kwafuneka ukuba abhale phantsi kwegama elithile.
Umzobo we I-Spartacus Uncede ngokukhawuleza ukuqamba umsebenzi ongumfuziselo kuhlobo lwenoveli yezembali. Wayipapasha ephuma epokothweni yakhe 1951, emva kokwaliwa kwabahleli abasixhenxe. Kulungile imbonakalo malunga ubudlelwane bamandla kunye nokuba semthethweni kobundlobongela. Kukwenziwa kwakhona ngokugqibeleleyo kwaye umzobo wengqondo yexesha.
La bhanyabhanya ka-1960 ngubani owalathisayo UStanley Kubrick kwaye banenkwenkwezi UKirk Douglas, uJean Simmons, uLaurence Olivier, uTony Curtis, uCharles Laughton noPeter Ustinov yanika ukubaluleka ngakumbi kwinoveli ka-Fast. Kwaye sonke sike savuka esihlweleni ukuba sibe nguSpartacus.
Ewe, siza kubabona kwakhona. NgePasika okanye nanini na. Kodwa Njani ngoku ngoku sizifundayo nathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Imbali yePasika esihlala siyibona. Kutheni singazifundi iincwadi?
Imivalo emininzi kuneevenkile zeencwadi, ... Okanye akunjalo?